Yinhle kunezimbangi iPeugeot 208
Fanelesibonge Bengu | April 3, 2022
IMOTO: PEUGEOT 208
UMA kukhulunywa ngobuhle kwaPeugeot benza umsebenzi oncomekayo ezimotweni zabo ngoba ziyawadonsa amehlo.
Cishe zonke izimoto zakamuva zale nkampani zinhle futhi uyakwazi ukusheshe uzibone ukuze ngezandawonye. Okuyiyona nto egqama kakhulu yingaphambili ne-grille ephicwe nge-chrome.
Iyenza yehluke kakhulu le 208 kunaleyo endala. Nendlela amaLED daytime running lights ami ngayo, aqondile ahlukile futhi enza iwadonse amehlo. Amalambu ekhanyisa ngawo nawo angamaLED ngaphambili nangemuva. Amarimu angu-17 inch, bese kuthi ngemuva ibe ne-roof spoiler nombala omnyama ocwebezelayo omesha kahle namalambu.
Ubuhle lobu buqhubeka nangaphakathi futhi uma uzijwayele izimoto zale nkampani. Ine-screen se-infotainment system esimi sodwa phezulu okuyilapho ulawula khona umsakazo.
Engingakuthandanga ukuthi uma udlala isiteshi ushintsha indawo, ayizihleli ukuze uqhubeke nokulalela leso siteshi. Kunalokho kumele wena uyiciphize ukuze ibheke kuma-frequency. Kulesi screen uphinde ukwazi ukuveza iselula uma uyixhume nge-Apple CarPlay, futhi igqama kahle.
Usetha ne-aircon yemoto uphinde ubone ingemuva uma uhlehla. Kunekhosomba elimnandi lokufihla izinto ngezansi kwamabhathini ama-hazard nokunye futhi kunezindawo zokubeka iziphuzo ezicabheni naphakathi nendawo.
Isiteringi sincanyana njengakwezinye zakwabo futhi uyakwazi ukusihlela ukuthi sime kanjani. Kuthanda ukuba yinkinga uma ubheka indawo ekahle yokuhlala ngoba ubuye usitheke kancane i-digital instrument cluster. Isiteringi sinamabhathini okulawula umsindo bese kuthi ngemuva kwaso kube nebhathini le-speed limiter necruise control okuthi uma ujwayele uliciphize ungalibuki ngoba vese licashile.
Izihlalo zintofontofo, inkinga yayo ukuthi ithothene ngaphakathi. Ngemuva nje, uma usufaka umgibeli wesithathu usuke usumpintsha futhi nesikhala ekhanda sifishane nokungenza abathengi babheke izimbangi njengeVW Polo, Renault Clio, nezinye.
Inenjini eyenza ihambe kahle engu-1.2 litre 3-cylinder kaphethroli ene-turbo. Inamandla angu-74kW ne-torque engu-205Nm.
U-gearbox ushintsha kalula uma ufaka amagiya ayo ayisithupha futhi lona igiya uma ulibamba lihlala kahle esandleni ligcwale. Uma isuka endaweni enyukelayo iyabambelela, ingahlehli nokuyinto enhle.
Emgwaqweni inamandla enele futhi intofontofo. Ngo-100km ibidla amalitha kaphethroli angu-7.5.
Lena yimoto encintisana kahle nezimbangi zayo kwazise iyabukeka, ihamba kahle emgwaqweni futhi inezinto nakwezinye izimoto ezikhona.
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 74KW M/T - R365 900
Iphuma ne-warranty yeminyaka emihlanu noma u-100 000km.